प्रभासले मान्लान् ‘महाभारत’मा आमिरको अप्रोच ? « Ramailo छ
प्रभासले मान्लान् ‘महाभारत’मा आमिरको अप्रोच ?
प्रकाशित मिति : Aug 29, 2018
समय : 12:10 pm
बलिउड अभिनेता आमिर खानको ड्रीम प्रोजेक्टमा बन्न लागेको फिल्म ‘महाभारत’ ले अहिले निकै चर्चा कमाइरहेको छ । उनले रिलायन्स इन्टरटेन्मेन्टसँगको साझेदारीममा यो फिल्म बनाउन लागेका हुन् । एक हजार करोड बजेट बन्ने यो फिल्म महाभारतको तीन वटा पार्ट बन्ने भएको छ ।
भारतीय मिडियाका अनुसार महाभारतमा रिलायन्स इन्टरटेन्मेटका मालिक मुकेश अम्बानीले एक हजार करोड लगानी गर्ने भएका छन् । मुकेश अम्बानी आमिर खानको यस प्रोजेक्टमा को–प्रोड्युसरको रुपमा रहने छन् । आमिरले यस फिल्मको लागि प्रभासलाई एपरोच गरेका छन् । अमिर चाहन्छन कि यस प्रोजेक्टको लागि ‘बाहुबली’ फेमका निर्देशक एस. एस. राजामौलीले नै निर्देशन गरुन् । राजामौली पनि ‘महाभारत’ लाई बेस्ट फिल्म बनाउने इच्छा देखाएका छन् ।
यो फिल्ममा दीपिका पादुकोणले ‘द्रौपदी’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भारतीय मिडियाले बताएको छ । आमिर खान आफै ‘कृष्ण’ को भूमिकामा देखिन सक्छन् । आमिर खान फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ को सुटिङपछि महाभारतको सुटिङ सुरु गर्ने बताँउछन् ।